Nagarik Shukrabar - ‘मलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने पनि थिए’
‘मलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने पनि थिए’
बुधबार, ०८ भदौ २०७३, ०९ : ३६ | मनोज घर्तीमगर , Kathmandu
नेपाली कार्टुन भन्नेबित्तिकै सबैका दिमागमा आइहाल्ने नाम हो, वात्स्यायन । प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट वात्स्यायनसँग मनोज घर्तीमगरले कार्टुनका विभिन्न आयामबारे संवाद गरेका छन् ।
पहिलो कार्टुन कहिले र कहाँ छापियो ?
विसं २०२२ सालमा ‘नयाँ सन्देश’ साप्ताहिकमा छापिएको हो ।
कार्टुन कसरी फुर्छ ?
सामान्यतया बाटोघाटोमा हिँड्दा, चियापसलमा बसेका मान्छेका गफ सुन्दा, गाउँघरमा सामान्य मान्छेले राजनीतिदेखि अनेकन विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको भनाइ के छ ? त्यो बुझ्छु । त्यसपछि मोटामोटी एउटा ‘कन्सेप्ट’ तयार हुन्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर कार्टुन फुर्छ । अर्को कुरा, दैनिक पत्रपत्रिका, तिनमा छापिएका लेख, अन्तर्वार्ता, राजनीतक विचार, विश्लेषण पढ्दा पनि कार्टुन फुर्छ । देशमा कुनै नयाँ ‘इस्यू’ आयो भने त्यसले पनि कार्टुन बनाउन उक्साउँछ ।
तपाईंको कार्टुनमा देखिइरहने कागको खास अर्थ के हो ?
उहिले कान्तिपुर दैनिकमा नारायण वाग्ले ‘कोसेली गफ’ भन्ने स्तम्भ लेख्नुहुन्थ्यो । कान्तिपुरमा मैले पनि केही समय पूर्णकालीन कार्टुनिस्ट भएर काम गरेँ । २०५६ सालतिर हो, नारायणले ‘कोसेलीलाई सामाजिक कार्टुन बनाएर दिने गर्नुप¥यो दाइ’ भन्नुभो । सामाजिक कार्टुनमा केही न केही त फरक दिनुप¥यो भन्ने सोचेँ । त्यसपछि कार्टुनमा एउटा काग राखेँ । कार्टुनमा काग आउनुको अर्थ चाहिँ काग सन्देशबाहक पन्छी हो भन्ने हो । अर्को कुरा काग आउँछ तर, केही पनि बोल्दैन । त्यसैले काग आम मानिसको प्रतीक पनि हो । आम मान्छेको बोली धेरै सुनिँदैन । त्यसैले कार्टुनबाट सुनाउन काग राखिएको हो ।
तपाईंको कार्टुन हेरेर कुनै नेता रिसाएका छन् कि ?
पञ्चायतकालमा पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाइँदा एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला कहाँ गएको थिएँ । त्यसपछि कुनै नेतासँग पनि दोहोरो चिनजान र त्यस्तो निकटता छैन । म कुनै नेताको अफिस र घरमा पनि गएको छैन । नेताको चाकडी गर्ने बानी पनि छैन । उनीहरू मेरो बारेमा के सोच्छन् ? त्यसबारे मलाई केही थाहा छैन । नेताहरूसँग आमनेसामने पनि भेटेको छैन । नेताका आसेपासेले र नजिकका मान्छेले पनि कार्टुनबारे केही कुरा ल्याउँदैनन्÷सुनाउँदैनन् ।
किन कुनै प्रतिक्रिया नआएको होला ?
म पनि छक्क पर्छु । किन कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन भनेर । कार्टुनको यति ठूलो महŒव छ, तर यहाँका नेताहरूले हल्काफुल्का तरिकाले लिने गरेको भएर पनि होला । विदेशतिर एउटै कार्टुनले हंगामा मच्चाउँछ । यहाँ जति राम्रो कार्टुन भए पनि मतलब छैन ।
राजनीतिक र सामाजिक विसंगतिलाई कार्टुनमार्फत प्रहार गरिरहनुभएको छ । तर, तपाईंले प्रहार गरेका पात्र र प्रवृत्ति नफेरिएका देख्दा नमज्जा लाग्दैन ?
नमज्जा त लाग्छ । मैले कार्टुनमा प्रहार गरेका पात्र र प्रवृत्ति बिलकुल फेरिएका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, अरू फेरिएन । सामाजिक र राजनीतिक विसंगतिको आवरण फेरियो, भित्री अनुहार सबै उस्तै रह्यो । तर, निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । सफलता प्राप्त नगरेपछि दुःख त लाग्छ तर यो गर्दै जानुपर्छ । एकदिन सफलता अवश्य मिल्नेछ । कार्टुनकै प्रभावले विश्वका ठूला देशमा परिवर्तन भएका छन् । नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा पनि कार्टुनको महŒवपूर्ण योगदान छ ।
तपाईंको सबैभन्दा बढी प्रतिक्रिया प्र्राप्त कार्टुन कुन हो ?
२०६२ तिर राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिइसकेपछि पत्रिकामा सेन्सर लाग्यो । सबै पत्रिकाका अफिस आर्मीले घे¥यो । आर्मीको स्वीकृतिविना पत्रिका छाप्न नदिने भयो । सम्पादकीय पनि महŒवहीन कुरामा आउन थाल्यो । त्यतिबेला प्रतीक प्रधान काठमाडौँ पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘ल दाइ, एउटा गजबको कार्टुन बनाइदिनुप¥यो’ भन्नुभो । मैले कार्टुनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संवैधानिक राजतन्त्ररूपी मरेको घोडालाई काँधमा हालेको बनाइदिएँ । यो कार्टुन यति धेरै विवादमा आयो कि म हैरान भएँ । गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी मिडियामा त शृंखलाबद्ध रूपमा मेराविरुद्ध आलोचना आयो । ‘राजाप्रति अनास्था फैलाउनेलाई बेलायतमा फाँसी दिइएको उदाहरण छ, वात्स्यायनलाई पनि दिनुपर्छ’ भन्नेहरू पनि देखिए । शैलजा आचार्य, सूर्यबहादुर थापालगायत नेताहरूले त कार्टुनबारे बोलेर जसरी पनि कारबाही गराउनतिर लागे । पञ्चायतकालीन व्यक्तिहरूबाट लगातार आरोप लगाइयो । तर, धेरै नेताले वास्ता गरेनन् । जतिसक्दो विरोध गरे पञ्चायतकालीन नेताहरूले । सरकारी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर उनीहरू मेराविरुद्ध लागिरहे ।
गिरिजाप्रसादले बेबी किङ र संवैधानिक राजाको कुरा झिकेर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका थिए । मैले व्यंग्य गर्न खोजेको नेपाली कांग्रेसलाई थियो । कांग्रेसबाट केही प्रतिक्रिया आएन । दरबारले कान्तिपुर दैनिकलाई पहिलेदेखि नै वक्रदृष्टिले हेरिराखेको थियो । त्यही कार्टुनको विवाद देखाएर दरबारले कान्तिपुरलाई कारबाही गर्ने बहाना झिक्यो । एक दिन नारायण वाग्लेले फोन गरेर ‘ल है दुर्गा दाइ, मैले अपुष्ट समाचार पाएको छु, कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्ट दुवैका सम्पादक, प्रकाशक अनि कार्टुनिस्टलाई गिरफ्तार गर्ने कुरो छ, तयार हुनुहोला’ भन्नुभो । पछि आन्दोलन सफल भयो, कसैलाई गिरफ्तार गरिएन । अनि, मैले सन् १९९० देखि २००० सम्म छापिएका कार्टुनबारे किताब निकालेँ । त्यो किताब फाइन प्रिन्टले निकाल्यो । किताब निकाल्ने सिलसिलामा मेरो छोरो अजित रमेशनाथ पाण्डेकहाँ गएछ । कार्टुनको विषयमा मलाई केही पनि जानकारी थिएन । ‘नयाँ सन्देश’को सम्पादक पाण्डे भएकैले उहाँले आइडिया दिनुभएको थियो । त्यही भएर रमेशनाथ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा क्याबिनेटमा मलाई गिरफ्तार गर्नेबारे कुरा भएको बेला ‘दुर्गालाई थुन्न हुँदैन’ भनेर रोक्नुभएको रै’छ । धेरै पछि छोरोबाट थाहा पाएँ ।
कम्प्युटरबाट कार्टुन बनाउने अहिलेको ट्रेन्डलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
राम्रो ट्रेन्ड हो, कार्टुनमा प्रविधिको प्रयोग गर्नु । मलाई पनि कम्प्युटरमा लेख्न मन लाग्छ । त्यसबाट छिटो हुन्छ । फिनिसिङ पनि आउँछ । तर, गुणस्तरीयता अलि कम हुन्छ । यत्रो वर्ष हातैले काम गरेँ । मैले फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ । यसमा धेरै पछि पर्छु भनेर नै कम्प्युटरतिर लागिनँ । सिक्दासिक्दै मेरो समय जान्छ भन्ने लाग्यो । कम्प्युटरबाट कलर गरिएका कार्टुन सबैका उस्तैउस्तै लाग्छन्, विचार र व्यंग्यको शैली फरक भए पनि । तर, कम्प्युटरको कलरमा मिठास हुँदैन ।
कार्टनुको काम के हो ?
खास गरेर जनमत बनाउनु हो । मनोरञ्जन दिनुका साथसाथै जनचेतना फैलाउनु पनि हो ।
राम्रो कार्टुनका विशेषता के हुन् ?
व्यंग्य खरो हुनुपर्छ, विचार सशक्त हुनुपर्छ, शैली पनि ‘स्ट्रङ’ हुनुपर्छ । कलात्मक पक्ष मजबुत हुनुपर्छ । कार्टुनिस्टसँग चित्रसँग खेल्ने सीप हुनुपर्छ । आम जनताले महसुस गरेको तर भन्न नसकेको कुरा कार्टुनमा आउनुपर्छ । मलाई धेरैले ‘हामीले भन्न नसकेको कुरा भनिदिनुभो’ भन्छन् । त्यो नै राम्रो कुरा हो । विशेषता हो ।
एउटा सत्य के हो भने पहिलेपहिले जो मान्छेले अरु काम गर्न सक्दैन, त्यो हिरो–हिरोइन बन्थे । उनीहरु नै सफल हुन्थे । एकदुई वर्ष इन्डस्ट्री हल्लाइदिन्थे । सिधैँ भन्नुपर्दा जो प्रोड्यूसर÷डिरेक्टरसँग सुत्न तयार हुन्थ्यो, उसैले लगातार फिल्म खेल्ने चान्स पाउँथ्यो ।
फिल्म सम्पादक ‘एडिटर’ बनिष शाहसँग नेपाली मात्रै हैन बलिउड भनिने भारतीय फिल्म सम्पादनको अनुभव समेत छ। २५ वर्षदेखि फिल्म एडिटिङमा व्यस्त उनले मुम्बईमा अजय देवगनको ‘दिवाने’ देखि भोजपुरी फिल्मका हिरो रवि किशनलाई स्थापित गराउने फिल्मसम्म सम्पादन गरेको अनुभव छ।
‘ग्रह दशा बिग्रिएछ, चोरको बात लाग्यो’
यो विवादले हाम्रो सोसल मिडिया कति खराब भइसकेछ, कति आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेछ भन्ने अनुभव गरायो। व्यक्तिगत रुपमा भने मलाई कतिले सुनिरहेका रहेछन्, मेरो म्युजिकल स्टाटस के रहेछ भन्ने पनि देखियो। विवादले धेरै कुरा सिकायो।